October 2014 - Page 4 of 53 - iftineducation.com
M/weynaha oo shaqadii ka eryay 21 Garsoore oo sharci daro
iftineducation.com – Digreeto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya, kuna taariikheysneyd 26-ka bishan ayaa waxaa shaqadii looga joojiyay 21 Garsoore, iyadoo loo cuskaday shaqo ka joojintooda in aanay ku dhisneyn qaanuunka dalka. Waxaa lagu sheegay digreetada Madaxweynaha in shaqada laga joojiyay garsoore kasta oo aan sharciga waafaqsaneyn, isla markaa faraha kula jira shaqo garsoor. Shaqo ka joojintan Garsoorayaashan ayaa ka dambeysay…
Ra’iisul Wasaare Cabdi Weli oo goodin & amar isugu daray golaha wasiirada
iftineducation.com – War-saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Ra’isul wasaaraha Xukuumadda Somalia C/weli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa waxaa digniin loogu jeediyay Golaha wasiirada Xukuumada Somalia. Amar uu soo saaray Ra’isulwasaaraha Xukuumada ayaa waxaa la faray Golaha wasiirada inay u hogaansamaan howlaha loo igmaday, islamarkaana aysan ka weecan nidaamka cusub ee Isku shaandheynta ah. Amarka kasoo baxay Ra’isulwasaaraha ayaa waxa uu ku socdaa wasiirada,…
Kullan uu albaabada u xiran yahay oo dhexmaray C/Weli, Jawaari iyo Faarax
iftineducation.com – Mid kamid ah golaha Wasiirada Xukuumada Somalia ayaa inoo xaqiijiyay in Kullan aan caadi aheyn uu goor dhow Garoonka diyaarada Aadan Cadde ku dhexmaray Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia C/weli Sheekh Axmed, Gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari iyo Faarax C/Qaadir. Wasiirka ayaa waxa uu inoo sheegay in kullanka uu ahaa mid Gudoomiyaha baarlamaanka uu ku dhex dhex dhexaadinayay Ra’isul wasaare C/Weli iyo…
R/wasaaraha Norway oo yaraanteedii saaxiib la aheyd nin muslim ah
iftineducation.com – Buug cusub oo laga qoray r/wasaaraha dalka Norway Erna Solberg ayaa lagu shaaciyay in yaraanteedii (20 jirka) ay saaxiib la aheyd wiil gambiyan oo muslin ah kaas oo lagu magacaabay Cusmaan. R/wasaaradda ayay wiilka Gambiyanka ahi wada socdeen mudo 2-sano ah, waxayna wax ka wada baranayeen caasimadda labaad ee Bagen. Waxaa la sheegay in ay booqatay wadanka Gambiya oo…
Liiska 23-ka Ciyaaryahan ee u sharaxan abaal marinta xidiga Aduunka ee FIFA Ballon d’Or oo la soo saaray
aadan21 / October 29, 2014
iftineducation.com – Waxaa la soo saaray liiska 23-ka ciyaaryahan ee u sharaxan ciyaaryahanka Aduunka ugu wanaagsan ee FIFA Ballon d’Or ayaa la soo saaray, iyadoo mar kale ay ka soo muuqdeen musharaxiintan ciyaaryahanada sida aadka ah u xafiiltama ee Ronaldo iyo Messi oo lixdii sano ee u dambeysay labadooda ku kala guuleysanayay. Sida muuqata Kooxda Real Madrid oo ku guuleysatay Koobka…
Daawo Sawirada:- Dagaalyanada Kuridish ka ah oo Ciidamo u Qoranaya Haweenka Si ay Isaga Caabiyaan Kooxda IS.
iftineducation.com – Dagaalyahanada Kuridishka ayaa xooga saaraya sidii ay u heli lahaayeen ciidamo dheeraad ah oo ay ka qortaan gobolka madama Kooxda IS ay soo saareen culeys xoog badan magaalada Kobane. Hadaba Dagaalyanadas waxa ka mid ah Gabadha layiraahdo Rihana oo iyadu sheegtay in ay dishay Boqol (100) kamid ah dagaalyanada IS waxa ayna sheegtay inta aysan ogeen oo ku…
Soo dhoweynta Ban Ki-moon oo Muqdisho ka socoto
iftineducation.com – Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ayaa la filayaa in maanta booqashadiisa labaad uu tago magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya. Booqashada Ban Ki-moon ee Muqdisho ayaa waxaa ku wehliya Madaxweynaha Bankiga Aduunka Jim Yong Kim, madaxda Hay´addaha Qaramada Midoobay ee dhinaca waxbarashada iyo gargaarka. ooqashadaan ayaa qeyb ka ah mid uu Xoghayaha Guud ku marayo dalalka Afirca, wuxuuna…
Shirar lagu diyaarinayo mooshin ka dhan R/wasaaraha oo socda
iftineducation.com – Xildhibaano iyo siyaasiyiin taageeraya mowqifka Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shirar iyo kulamo ku leh Hoteelada Muqdisho, gaar ahaan Hotel Jaziira, iyagoo ka arinsanaya diyaarinta mooshin la sheegay in laga gudbinayo Ra´iisul Wasaaraha oo khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo Madaxweynaha. Wararka ayaa sheegaya in Ujeedka kulamadan ay yihiin md lagu taageerayo Madaxweyne Xasan oo dagaal siyaasadeed uu kala dhaxeeyo Ra’iisul…
Xoghayaha ‘Guud ee Q/midoobay oo Muqdisho soo gaaray: Sawirro
iftineducation.com – Wafdi uu hogaaminayo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa goor dhow ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo wadooyinka soo gala garoonka loo xiray sababo ammaan. Ban Ki-moon iyo wafdigiisa ayaa abaarihii 12-kii duhurnimo iyo qadar daqiiqado ah ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, waxaana uu ka soo kicitimay dalka Kenya oo uu saakay…
Iiraan oo ceeji ku dishay Gabar dishay nin kufsan rabay: Video
iftineducation.com – Haweeney lagu magacaabo Reyhaneh Jabbari ayaa lagu dal dalay magaalada Rajai Shahr ee ku taal duleedka caasimada Tehran, iyadoo haweeneydan Hooyadeed lagu wargeliyay Jimcihii lasoo dhaafay inay usoo daawasho tagto dilka gabadheeda. Reyhaneh oo 26 sano jir aheyd ayaa dishay nin isku dayay in uu kufsado, hase ahaatee is difaacadii ay sameyneysay u geeriyooday ninkaasi oo ka tirsanaa Wasaaradda…